Taorian’ny nahariana ny tany dia napetraka tao amin’ny Saha Edena i Adama. Fa ny zava-dehibe nolazain’Andriamanitra aza dia ny hoe: “tsy tsara raha irery ralehilahy” (Mosesy 3:18; jereo koa ny Genesisy 2:18), ary lasa vady sy mpanampy sahaza ho an’i Adama i Eva. Ny fiarahana tsy manan-tsahalan’ny fahafahana ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina, ary ara-pihetseham-po an’ny lahy sy ny vavy dia nilaina mba hanatanterahana ny drafitry ny fahasambarana. “Kanefa ao amin’ny Tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy, ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy” (1 Korintiana 11:11). Ny lehilahy sy ny vehivavy dia natao mba hianatra avy ami